Zlatan Ibrahimovic Oo Saddex Sannadood Laga Mamnuucayo Ciyaaraha & Dembiga Culus Ee Uu Galay - Laacib
HomeSerie AZlatan Ibrahimovic Oo Saddex Sannadood Laga Mamnuucayo Ciyaaraha & Dembiga Culus Ee Uu Galay
Zlatan Ibrahimovic Oo Saddex Sannadood Laga Mamnuucayo Ciyaaraha & Dembiga Culus Ee Uu Galay
April 14, 2021 Abdiwahab Ahmed Serie A, Wararka Ciyaaraha Maanta 0
Toddobaadkani uma fiicnayn Zlatan Ibrahimovic, sababtoo ah waxa uu qaatay kaadh cas kulankii Parma, haddana waxa loo haystaa dembi kale oo ah in uu jabiyey sharciga xakamaynta korona Fayras iyo mid kale oo halistiisu badan tahay oo uu ku waajahayo ganaax illaa saddex sannadood laga saaro ciyaaaraha.
Zlatan Ibrahimvoic oo iska leh shirkadda khamaarka ee lagu magacaabo Bethhard, waxa uu dhowaan qirtay in uu jabiyey shuruucda FIFA iyo UEFA ay kasoo saartay khamaarka.
Sida uu qoray wargeyska Altonbladet ee kasoo baxa Sweden, Ibrahimovic ayaa iska leh mulkiyadda shirkaddan khamaarka, waxaana uu sharciga FIFA iyo midka UEFA uu dhigayaa in ciyaartoyda qayb ka qaata, amaba lacago ka hela shirkaddaha khamaarka, aan loo ogolaanin in ay ka qayb-galaan tartamada ay maamulaan FIFA ama UEFA.
Sannadkii 2018kii ayuu Zlatan Ibrahimovic ka mid noqday mulkiileyaasha shirkadda Bethard, waxaana guddoomiyaha shirkadda oo lagu magacaabo Erik Skarp uu dhowaan xaqiijiyey in Ibrahimovic uu ka mid yahay saamiileyaasha shirkadda.
Erik Skarp ayaa waqtigaas waxa uu wuxuu xayaysiis u samaynayay shirkaddan, waxaanu magaca Ibrahimovic qayb ka qaatay in dad badan ay helaan.
Bethard ayaa la sheegay in sannadkii 2019kii ay samaysay lacag gaadhaysa 30 milyan oo Euro oo cashuur la’aan ah, waxaana la filayaa in muddadii ka dambaysay ay faa’iidadeedu si xad-dhaaf ah sare ugu sii kacday.
Wargeyska Aftonbladet waxa kale oo uu sheegay in Ibrahimovic uu hadda waajahayo ciqaab FIFA ku riddo oo ah in muddo saddex sannadood ah ciyaaaraha laga mamnuuco iyo ganaax lacageed oo gaadhaya illaa 100,000 Euro. Xidhiidhka kubadda cagta Yurub ee UEFA ayaa isagana la filayaa in uu ciqaab u gaar ah ku rido.